Kanada waxay ugu deeqday US $ 1.1 milyan waxbarashada nabadda ee Filibiin - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Kanada waxay ugu deeqday US $ 1.1 milyan waxbarashada nabadda ee Filibiin
August 26, 2021 Warar & Muuqaal 1
(Waxaa daabacay: Xarunta Warbaahinta Filibiin. Ogosto 18, 2021)
MANILA, Filibiin - Canada waxay ku deeqaysaa maaliyad dheeri ah oo ah US $ 1.1 milyan ama ku dhawaad ​​P44 milyan waxbarashada nabadda ee Filibiin, sida lagu sheegay war -saxaafadeed ay soo saartay Safaaradda Kanada ee dalkaas.
Gaar ahaan, dawladda Kanada waxay oggolaatay sii -deynta qaddarkaas si loo ballaadhiyo hirgelinta “1001 Habeenkii Barnaamijka Waxbarashada Madaniga iyo Nabadda” oo la gaarsiiyo Ismaamulka Bangsamoro ee Mindanao Muslim (BARMM).
Isbeddelka Xayawaanka: Mashruuca Habeennada 1001 wuxuu doonayaa inuu taageero joogtaynta waxbarashada carruurta fasallada afar illaa lix inta lagu jiro faafitaanka COVID-19, iyadoo kor loo qaadayo nabadda iyo xasilloonida BARMM.
“Habeennada 1001” waa barnaamij madadaalo waxbarasho oo dhinacyo badan leh oo adeegsada kaartoonno si loo baro xirfadaha nolosha carruurta iyo qiyamka bulshada, oo ay ku jiraan rabshad la’aan, xuquuqda aadanaha, dimuqraadiyadda, iyo sinnaanta dheddig-laboodka, ee goobaha waxbarashada rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahaynba.
Iyada oo la kordhinayo fahamka carruurta ee qiyamka madaniga ah, mashruucan ayaa looga golleeyahay in lagu yareeyo u nuglaanta carruurta BARMM ee darawalada xasillooni darrada.
Mashruucu wuxuu tababar iyo taageero waxbarasho siin doonaa 50,000 oo carruur ah (30,000 gabdhood), 5,000 waalid/daryeel -bixiye (3,000 oo haween ah), iyo 1,500 macallin (1000 haween) oo ku jira 100 dugsi oo ku yaalla gobolka.
Waxaa bixin doona Vancouver oo fadhigeedu yahay Big Bad Boo Studios, Inc., iyadoo lala kaashanayo BARMM Wasaaradda Aasaasiga, Sare, iyo Waxbarashada Farsamada.
"1001 Habeenkii Barnaamijka Waxbarashada Madaniga iyo Nabadda" wuxuu ku saleysan yahay taxane telefishan firfircoon oo aad loo jecel yahay oo abaalmarin leh oo la yiraahdo "1001 Habeennada", kaas oo loo sii daayay sidii madadaalo ganacsi ee shabakadaha telefishinka ee ka sarreeya 70 dal oo loogu talagalay dhagaystayaasha caalamiga ah ee ka badan 100 milyan oo qof.
27 Marawi, macallimiinta LDS oo dhammaystiray tababarka waxbarashada nabadda (Filibiin)
August 20, 2021 Warbixinnada Waxqabadka 0
“Tababarkii 3-da maalmood ahaa ee ku saabsanaa waxbarashada nabadda ayaa igu qalabeeyay aqoonta iyo xirfadaha aan ku wadaago waxbarashada nabadda. Waxaa loo baahan yahay in la helo xasilooni maskaxeed dhexdeena ka hor inta aanan la wadaagin dadka kale, ”ayuu yiri mid ka mid ah ka qaybgalayaashu. [sii wad akhriska…]
La Taliyaha Madaxweynaha ee Nabadda ayaa sheegay in dowladdu ay tahay inay hirgeliso waxbarashada nabadda (Filibiin)
March 8, 2020 Siyaasadda 0
Lataliyaha Madaxweynaha ee Nabadda Carlito Galvez Jr ayaa ugu baaqay dowladda inay machad ka dhigto waxbarashada nabadda si kor loogu qaado bogsiinta bulshada loona oggolaado hoggaamiyeyaasha dhallinyarada inay noqdaan wakiillo nabadeed iyo horumar bulshada ay ka soo jeedaan. [sii wad akhriska…]
Waxbarashada nabada waxay soo saartaa khibrad wadaaga kaqeybgalayaasha
December 30, 2017 Warbixinnada Waxqabadka 0
Khilaafka qoyska iyo isku dhacyada bulshada ayaa ka mid ahaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira gobolka Lanao del Sur. Xarunta Horumarinta Dadka ee Maranao (MARADECA) Waxay fududeeyeen aqoon isweydaarsi ku saabsan waxbarashada nabadda si wax looga qabto dhibaatooyinkaas. [sii wad akhriska…]
Maxamed Ashraf Cali wuxuu leeyahay,
August 26, 2021 at 9: 40 pm
Waxaan u baahanahay inaan ku badino Hindiya. Annagu waxaannu nahay RightvTrack oo ah Urur Bulsho Rayid ah oo fadhigiisu yahay Kolkata oo shaqeynaya illaa 30 sano oo leh habka isku -dhafan ee horumarinta bulshada, kaas oo geeddi -socodka Dhismaha Nabaddu uu ka mid yahay istiraatiijiyaddayada. Haddii aan si wadajir ah u wada shaqeyno waxay heli doontaa natiijo wanaagsan maalmaha soo socda.